eNasha.com - रानीको भात खुवाइ र पेज थ्री गफ
शुक्रबार दिउँसो मोबाइल रन्थनाउँदै चिच्यायो- "फोन आयो, फोन आयो !" "हेल्लो !" मेरो आवाजले फोन पर्तिर को रहेछ भन्ने जिज्ञासा पोख्यो । "तपाइँले मेरो नम्बर 'सेभ' गर्नु भा' रै'नछ", एउटा सुमधुर आवाजले मलाई लज्जित बनाउँदै अनुरोध गर्‍यो- "भोलि शनिबार १२ बजे दरबार होटलमा मेरी छोरीको भात खुवाउने समारोह छ, आइदिनु पर्‍यो ।" यतिञ्जेल उनले परिचय दिइसकेका थिए र भन्न भ्याइपनि हाले- "अब चाहिँ सेभ गर्नुस् है !"
निम्तोका लागि धन्यवाद दिएँ प्रख्यात गायक रामकृष्ण ढकाललाई । तर भोलिपल्ट हुँदानहुँदै झन्नैझन्नै निम्तो बिर्सिसकेको थिएँ । हतारोमा सबै थोक बिर्सिएर दरबार होटल पुगेँ । हतारोमा आएकाले मैले रानीलाई ढोग्न मात्र भ्याएँ, तिनलाई केही उपहार दिन नपाएकोमा थक्कथक्कमा परिरहेको थिएँ । त्यहाँ सिनेमा, सङ्गीत, प्रशासन र राजनीतिका गनिएका व्यक्ति पनि निम्तो मान्न आइसकेका थिए । सानोतिनो भीँड, भीँडभित्रका आफ्ना कथा र पात्रहरु-
"मैले त झुक्किएर आलोकश्रीलाई नमस्ते भनेछु", एउटा कुनाबाट आवाज आयो । त्यो आवाजले भन्दैथियो- "तर केही छैन, उहाँसँग एक समय मतभिन्नता भएर झगडै परे पनि हामीले उहाँसँग हरसमय दुश्मनी नै निभाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।" यसो फर्किएर हेरेँ, युवा पुस्ताका मोहक गायक स्वरुपराज बात मार्दै थिए । 'स्वर' गीतिएल्बम सुरताल म्युजिकले बजारमा ल्याएपछि एल्बमका निर्माता आलोकश्री र गायकद्वय सत्य-स्वरुपबीच गहिरो मतभिन्नता भएको थियो । कारण ? यो एउटा लामो कथा छ, पछि तपाइँलाई बताउँला !
यता सङ्गीत टाइकून सन्तोष शर्मा (क्या त, म्युजिक नेपाल !) स्ट्याण्डर्ड चार्र्टर्ड बैंकका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर (नाम भुलेँ) सँग गहिरो बात मार्दैथिए र पंक्तिकार त्यहाँ पुगेपछि ती अधिकारी पंक्तिकारसँग मोडिए । ती अफिसर रामकृष्ण ढकाल नेपाली सङ्गीत उद्योगमा किन महत्वपूर्ण छन् भनेर बतियाउँदै थिए । तिनी चाहिँ रामकृष्णको सरल हृदयबाट प्रभावित रहेछन्, उनले गाएका गीतझैँ !
ए, एक जना पराजुली डीएस्पी सा'बसँग परिचित भएँ म । ज्यादै सरल व्यक्ति तर हाँस्दा संगीतको तान तानिएझैँ सुर केहीबेर स्थिर ! उहाँ गीतकार पनि ! त्यसैले देशका स्थापित गायकसँग हिमचिम ज्यादै रुचिकर लाग्ने रहेछ उहाँलाई । रोचक के रहेछ भने त्यो पार्टी उपलब्ध भएको बनेलको मासु उहाँद्वारा प्रायोजित रहेछ ! बनेलको मासु ज्यादै रुचाउनेहरुलाई उहाँसँग सम्पर्कका लागि केहीले हार्दिक आग्रह गरेको पनि देखियो ।
"ऊ...ऊ... आगो ओकल्ने व्यक्ति आइपुग्नु भयो", टेलिभिजनका हस्ती भूषण दाहालको मूलद्वारमा प्रवेश हुने बित्तिकै सानोतिनो हल्ला मच्चियो । नजिक जाने र आर्शीवाद लिनेको एउटा सानो लस्कर लाग्यो ।
'महामहिम ज्यू', भूषण दाहालको आग्रहपूर्ण बोलावट थियो सङ्गीतकार न्हृयू वज्राचार्यलाई । तर वज्राचार्य अरु कोहीसँगै बात मार्न व्यस्त रहेकाले उहाँले सुन्नु भएन । 'नयाँ कोट लगाएँ भन्दैमा हाम्रो आवाज नसुन्ने !' कड्किएपछि झसङ्ग हुँदै वज्राचार्य छेउ आइपुग्नु भयो । त्यसपछि तँ तँ र म म ! (ज्यादै मिल्ने साथी भएपछि सार्वजनिक ठाउँमा पनि तँ तँ र म म गर्दा वज्राचार्य र दाहालको यो सम्बन्ध नदेखेकालाई यस्तो रमाइलो भेला रुचिकर हुने नै भयो !)
'ए... तैंले त फिल्म बनाउँदैछस् अरे नि ! सुटिङ कैले ?' वज्राचार्यको जिज्ञासा । 'फिल्म रिलिज हुन लागिसक्यो, सुटिङको कुरा सोधिराख !' दाहालको आपत्ति ! सूचना अपटुडेट गर्न नपाएकोमा पछुतोजस्तो मानिरहेका वज्राचार्यले आर्श्चर्य पनि थपे- 'ए हो र ?' 'तर त्यो थाहा पाएर पनि केही हुने वाला छैन, किनभने मेरो फिल्ममा म्युजिक छैन, त्यसमा तैँले म्युजिक हाल्न पाउँदैनस् !' दाहालको अर्को ठट्टा, वरपरका रमितेको हलल्ल हाँसो !
दुइ बजेतिर जीनको केही पेग लिएर एक हुल 'स्टार'हरु दरबार होटलको एउटा कुनामा बसे, घमाइलो ठाउँ रोजेर ! त्यहाँ त्यही बनेल सबैभन्दा बढी रुचाइयो । र, बनेलको मासु किन यति मीठो भएको होला भन्ने विषयमा सानो छलफल शुरु भयो । सङ्गीतकार वज्राचार्यले थपे- 'शायद यसमा प्रयोग गरिएको मसलाले होला !' 'उसो भए तँ यो मसला मात्र खा, हामी चाहिँ मासु खान्छौँ !' दाहालको चर्को रमाइलोपन पुनः दरबार होटलको आँगनमा छरियो । रमितेहरु पुनः हास्न मग्न भए ।
"हामी रोल्पाबाट आयका !", एउटा जुँगामुठे वृद्ध दाहालतिर लम्किँदै भने- "सरलाई देखेर फोटो खिचम् भनिन्, यी मेरी जहानले !" एक जना रसिली महिला परिदृश्यमा देखापरिन् र सोझै दाहालतिर लम्किइन् । साथमा अन्य केही व्यक्तिहरु पनि । टेलिभिजनका 'स्टार' दाहाल, सङ्गीतकार वज्राचार्य भींडमा सामेल भए र अरु भीडबाट बाहिरिए । बाहिरिनेमा म पनि थिएँ ।
सोमबारको फायरसाइडमा कमरेड प्रचण्डको अन्तरवार्ताको रमरमी अझै हराएको थिएन । त्यसैले त्यो रमझममा भेला भएकाहरुले कुरा उप्काइहाले- 'जे होस्, कार्यक्रम राम्रो लाग्यो ।' तर त्यो तारिफतिर ध्यान नदिई जोकिङ मूडमा रहेका दाहालले भने- 'प्रचण्डजी चाहिँ जहिले पनि टन्न भोजन गरेर इन्टरभ्यूमा बस्दा सधैँ डकार्नु हुँदोरहेछ !' सबै हलल्ल हाँसे । यतिबेलासम्म त्यो भेला समावेशी भइसकेको थिएन किनभने त्यहाँ प्रायः क्षेत्रीबाहुन मात्र थिए । सञ्जिव मिश्र (श्रीमान् नलीना चित्रकार) श्रीमतीसहित आएपछि बल्ल त्यसले आकार लिन लाग्यो । तापनि दाहालले भने- 'मधेसी जनअधिकार फोरम समावेश भएपछि यो भेला अब केही समावेशी भएको महसूस भयो तर अझै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुन बाँकी छ । ए... ल त्यो आवश्यकता पनि पूरा भयो । नीमा रुम्बाजी आइपुग्नु भयो !" सबैले नीमातिर हेरे ।
छोरा र श्रीमतीसहित भीडमा समावेश नीमालाई देखेपछि उहाँको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणका चर्चा अर्को कुनामा छेडियो । नीमासँगै अमेरिका छिरेका गायक राजु लामा उनको मंगोलियन हर्ट अझै नेपाल नफिरेकोमा केहीको स्पष्ट चिन्ता अनुहारमा थियो । कतिसम्म भने कतिपय गायकहरुको खाने मेलो नै अमेरिका भ्रमणको सांगीतिक कार्यक्रम हो । यसरी भ्याट्भ्याटी गायकगायिकाहरु अमेरिका छिर्ने र त्यहाँबाट नफर्किने शैलीले अरु गायकहरुलाई पनि मर्का पर्ने निश्चित छ । राजु लामाजस्ता स्थापित गायकले किन त्यसो गरे होलान् भनेर पत्रकारले पनि चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाली सङ्गीतकर्मीहरुको यस्तो बेफ्वाँक शैलीका कारण सके अबका केही दिनभित्र राजुका विरुद्ध समाचार पनि लेखिएलान् ।
यसपछि पर्दामा सङ्गीतकार राजु सिंह देखापरे । ज्यादै नरम स्वभावका सिंह पालैपालो सबैसँग चिरपरिचित मुस्कानसहित झुक्दै र नमस्कार गर्दै आइपुग्दा नपुग्दै यता सत्यराज आचार्यलाई भूषण दाहालले व्यङ्ग्य कस्न भ्याउनु भयो- 'तैँले त नरशमशेरलाई नलिई आइछस् त !' (बिहे गरेपछि लोग्नेमान्छे शहीद हुन्छ । श्रीमतीले चाहिँ शहीद बनाउने !) 'माइत गई, अनि तपाइँको नि !' सत्यले मौका किन छाड्थे, सोधिहाले । 'मेरी नरशमशेरलाई त म कहिले पनि छाड्न सक्तिनँ', छेउमा श्रीमती दाहाल (कोहिनूर) मुस्काउँदै हुनुहुन्थ्यो तर दाहालको भनाइ जारी थियो ।
यता गीतकार तथा रेडियोकर्मी नवराज लम्साल नेपाली गीतको शैली र लेखन परिवर्तन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै नयाँ शैलीका गीतको चर्चा चलाइरहेका थिए । साथ दिँदै थिए, सुगम पोखरेल, अर्का गीतकार उत्तम भौकाजी, युवाकवि भूपेन्द्र खड्का र अन्य !
पूरा दिन बित्न लागेको थियो अब । खाना खाने एउटा समूह छुट्टियो र कुराको मेलो गज्याङमज्याङ भयो । मलाई पनि भोक लागिसकेकाले म त्यतातिर दौडेँ । टन्न भोजन लिइसकेपछि होटलको लनमा देखेँ, रानीको भिडियो ठूलो प्रोजेक्टरमा प्रसारण भइरहेको थियो, जसमा रामकृष्ण आफ्नी छोरीलाई खेलाउँदै थिए, फुल्याउँदै थिए । प्रोजेक्टर अघिल्तिर श्रीमती ढकाल (नीलम) नानीलाई लिँदै पाहुनासँग छोरीका विषयमा छलफल गर्दै थिइन्- "मेरी छोरी ढुक्क कि छे, कहिल्यै झगडा गरेकी छैन । बरु आज थाकेर होला, अलि झगडा गर्न खोज्दैछे ।" छेउका महिलाहरु नीलमको कुरामा सहमत जनाउँदै थिए ।
टेलिभिजनको अग्लो मान्छे
सफलताको एक कथानायक